प्रदेश-३ – Page 236 – Halkaro
प्रभावहिन हतियार संकलन कार्यः २०४ हतियार मध्ये २२ वटा मात्र प्रहरीसँग
प्रकाशित मिति : २०७४, १३ बैशाख बुधबार May 2, 2017
चितवन । स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सुरु भएको हतियार संकलन अभियान चितवनमा प्रभावहीन देखिएको छ । जिल्लामा दर्ता भएका २ सय ४ वटा हतियारमध्ये अहिले जम्मा २२ वटा हतियार मात्रै प्रहरीमा आइपुगेका छन् । त्यस मध्ये पनि दुई वटा हतियार भने दर्ता नभएको चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो । हतियार संकलन अभियान […]
सडक किनारको रुखलाई लिएर वन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयबीच विवाद
प्रकाशित मिति : २०७४, १३ बैशाख बुधबार April 26, 2017
चितवन । विरेन्द्र क्याम्पस अगाडिको सालको रुख काट्नमा सडक डिभिजनले गैरजिम्मेवारी देखाएको जिल्ला वन कार्यालय चितवनले आरोप लगाएको छ । सडक विस्तारका लागि विरेन्द्र क्याम्पस अगाडिको रुख काट्नै पर्ने सडक डिभिजनको भनाइ छ । भरतपुर महानगरमा सवारी साधनको चाप बढे संगै सो रुखले सडक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले जानकारी गराएको छ । […]
भरतपुर अस्पतालले ओपीडी सेवा विस्तार गर्ने
चितवन । भरतपुर अस्पतालको ओपिडी सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अस्पतालमा विहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा अर्थात नियमित ओपिडि सेवा सुरु गर्ने भएको हो । बैशाख १५ गतेदेखि ओपिडि सेवा विस्तार गर्न लागेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. रुद्र प्रसाद मरासिनिले जानकारी दिनुभयो । तीन बजेसम्म […]
माओवादी केन्द्र रत्ननगर वडा नं १० मा विशेष घरदैलो अभियान
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्र रत्ननगर वडा नं १० ले घरदैलो अभियानलाई विशेष रुपमा अगाडी बढाई रहेको छ । ईतिहासमै पहिलो पटक हुन गईरहेको स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिदैं जाँदा आज पनि रत्ननगर नगरपालिका वडा १० मा माओवादी केन्द्रले घरदैलो र प्रचारप्रसार अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र रत्ननगर वडा नं १० ले वडा […]
औलोका विरामी घटे
चितवन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले चितवनमा औलोका विरामीको सख््या घटेको जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा १३३६ जनाले रगत परिक्षण गरेको मध्यमा १४ जना औलोका विरामी फेला परेको जानाकारी दिएको छ । विश्व औलो दिवस–२०१७ को अवसर पारेर मगंलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले विगतका वर्ष ०७१ र ७२ र ०७२ […]
चितवनमा औँलोः कहाँ कहाँ छ जोखिम ?
चितवन । सदाका लागि औलो अन्त्य गरौँ भन्ने मूलनाराका साथ मंगलबार देशभर विश्व औलो दिवस–२०१७ मनाइएको छ । विश्व औलो दिवस मंगलबार नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । यसैक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय चितवनले भरतपुरमा चितवनका सञ्चारकर्मीहरुसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । चितवनमा औलोका विरामीको संख्या घटेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले यो […]
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपिल
चितवन । निर्वाचनलाई शान्तिपुर्वक, सभ्य र धाधलीरहित बनाउन राजनितिक दल, मतदाता, कर्मचारी सँगै सम्पुर्णको महत्वपुर्ण भुमिका रहने एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताउनुभएको छ । स्थानिय तहको निर्बाचन नजिकिदै गर्दा निर्बाचनलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सबैले आफ्नो भुमिका निर्बाह गरे सभ्य र धाधली रहित निर्बाचन हुने स्थानिय तह निर्बाचन २०७४ सरोकारवाला संगको छलफल कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो […]